तर्क शास्त्र – आफ्नै भोगाई आफ्नै तर्क…
आमा बिनाको आमाको मुख हेर्ने दिन!
April 16, 2018 April 16, 2018 Deep Jyoti Leaveacomment
एकाबिहानै आमा भेटिन्छ कि भनेर मातातिर्थ धाएँ । आजकल म कुनै पनि बहाना छुटाउदिन जसले मलाई मेरो आमाको नजिक पुर्याओस् । पशुपतिमा रात भर बसेर बत्ति बाल्नेदेखि लिएर भिडभाड छिचोल्दै तिर्थ धाउनेसम्म पनि तर विरक्त लाग्छ खै कहिँ कतै भेट्दिन उनलाई । सधैं मनमा एकखालको पछुतो छ कि उनलाई अझ धेरै दिनसम्म बचाउन नसकेकोमा, जीवनभर उनको सेवा गर्न नपाएकोमा । खै कसलाई दोष दिने आफैलाई, क्यान्सरलाई, अस्पताललाई, डाक्टरलाई, भगवानलाई कि कसलाई ? भक्कानो फुटेर आउछ जब यस्ता कुराहरुले दिमागलाई अनायासै घरीघरी पिरोल्ने गर्छ । झन् अझ भक्कानो फुटेर आउछ जब वर्षैपिच्छे यस्ता डेहरु घुमेर आउछन् ।
हुन त औशीहरु प्राय: काला नै हुन्छन् । सायद त्यही भएर मजस्ताको लागि पनि कालै रह्यो र अब सधैं रहनेछ । कालो यस अर्थमा कि आज जोमा सम्पर्पित दिन हो उनीनै छैन यो संसारमा अब यो दिन मनाउनको लागि, अब कसको मुख हेर्ने, कसको लागि खुशी हुने । जता गयो लाग्छ सबै खुशी छन् सबैलाई आफ्नो आमा भेट्न जानको, आमाको मुख हेर्नको चटारो छ । चारैतिर खुशियाली छ । अरु डेहरु प्राय: त्यति वास्ता हुँदैन रहेछ, मनाए पनि नमनाएपनि, कोहि भएपनि नभएपनि तर आज चाहिं किन हो मन सार्हो खल्लो हुँदो रहेछ । सायद आमा शब्दनै यति महान् भएर होला । यो सम्बन्धनै यति मिठो भएर होला । Continue reading →
कार्कीमाथि किन महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमै उनका पछिल्ला क्रियाकलापहरुले पुष्टि गर्दै आएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव सहि दिशामा चालिएको एउटा सकारात्मक कदम हो । तन्नेरी चासोमा आवद्द हामी तन्नेरीहरूले कार्की नियुक्तिको प्रकृयाको दौरानमानै उनी यस पदका लागि अनुपयुक्त तथा अयोग्य व्यक्ति हो एवं उनको सो पदमा गरिने नियुक्तिले जनआन्दोलनको मर्म एवं भावनामा गम्भिर आघात पुग्दछ भनेर व्यापक खबरदारी गरेका थियौं । Continue reading →